Sary avy amin'ny Inside Passage an'ny British Columbia
Nahoana ny Mpaka Sary no Tokony Haka ny Lakandranon'i Kayak Britanika
Mitongilana mianatsimo atsinanan'ny morontsirak'i Vancouver , ny lakana dia mipongatra avy eo amin'ilay vatolampy voalohany: Hitako ny bozaka mainty eo ambanin'ny masoandro mafana. Manosotra ny saiko sy ny fofony aho na aiza na aiza alehan'ny paiso azy. Ny masoandro no toetrany lehibe indrindra, ny fialofany, ary miditra ao izy. Manapaka ny taolany lavalava sy tongany izy, manova ny vatany amin'ny salohy iray farany ambany alohan'ny hidirany ao anaty valan-javaboary mivelatra eo amin'ny tonta.
Rehefa mibanjina moramora ny làlana hiverina ao anaty ala maitso izy dia mientanentana amin'ny fotoana farany izay vao nipoitra teo anoloako. Ny faharoa dia mahatsiaro lava lava amin'ny fotoana izay manenika lavitra be amin'ny zavaboary lehibe iray amin'ny toerana toy izany.
ROW Adventures Misongadina
Nandritra ny fandevenana an'i ROW Adventures nandritra ny herinandro, dia lasa mahazatra ny fotoana toy ireny, nefa tsy mamoy ny ainy mihitsy izy ireo. Miankina amin'ny taonan'ny taona, amin'ny andro tena izy any an-dranomasina, dia afaka manantena hahita trozona misy trondro, liona, tombo-kase, ary angamba eny. Raha mitady fialantsasatra tahaka izao, izaho sy ny ekipan'ny mpilatro dia mametraka ny lanjany ny sakafo maraina isa-maraina, ka mamela ny tobinay fototra ao Little Kaikash mba hijerena ny Inside Passage an'ny British Columbia isan'andro.
Mandritra ny fandehanana tsirairay, dia mahagaga foana ny zavatra ho hitantsika. Ny lesona iray nianarako haingana tao anaty rano dia ny fametrahana ny fakantsariko amin'ny alàlan'ny teboka haingana, izay ahafahako mampiakatra mora ny akanjo mainty napetraka manodidina ny tranoko kayak mba hahazoana antoka (sy ny mainty) mahazo ny fakantsariko mba hisambotra ireny fotoana manokana ireny amin'ny sarimihetsika .
Na dia mandanjalanja ny fahamendrehana aza ny rano mipoitra amin'ny ranomasimben'ny ranomasina, dia tsara ny filokana mba haka sary ny orkena hivezivezy amin'ny rano ao anaty tongotrao.
Indray mandeha, isika dia tsy milefitra tanteraka toy ny kapoakan'i Doll's porpoise tonga haingam-pandeha eo ambanin'ny kakay.
Ny fananana fakantsary eo ambanin'ny ahy dia manaporofo ny fihetsika hentitra, toy ny azoko entina ny sombin-tsakafo rehefa mandalo amin'ny rano izy ireo. Amin'ny lafiny hafa, betsaka ny fotoana hanangonana ny bibidia manodidina ny British Columbia. Raha manao tranokala Browning Wall isika - izay antsoin'ny mponina ao an-tanimbolin'ny vatolampy - dia mamakivaky ireo vatolampy lehibe ao amoron-dranomasina izay miafina amin'ny rivotra avo ary hita eny amin'ny rivotra ambany. Rehefa mandeha amin'ny alàlan'ny ranomasimbe marindrano isika, dia mahita kintana an-dranomamy indroa ny haben'ny tanantsika mianjera amin'ny rindrina. Ao amin'ny loko rehetra mety ho azo eritreretina, dia mamirapiratra mamiratra amin'ny vato mainty, mavokely, volomparasy ary hoditra maitso izy ireo ao anaty rano kristaly.
Indray maraina, miantomboka amin'ny tora-pasika akaiky akaikin'ny Izumi Rocks isika. Mandeha rivotra amin'ny rivotra izahay, mandalo vato misamboaravoara mba hijoro vavolombelona amin'ny andiam-bibidia mivezivezy eny amin'ny rivotra, mamelatra ny lanitra amin'ny bodofotsy fotsy toy ny lavenona lavenona mamela ny fivoahan'ny afo. Raha vantany vao tonga ny tany, dia manangona ny sambo ho any amoron-dranomasina isika alohan'ny hikarakarana ny masoandro. Nijanona teo amin'ny hazo kely aho, ary nandevina ny vatako teo anelanelan'ireo vato matevina, dia nidina teo amin'io toerana kely io aho, izay nanodidina ny hantsambe volkano izay namorona efa ho 65 tapitrisa taona lasa izay. Rehefa manomboka mihinana isika, dia mandre antsika ny radio misy antsika izay manakaiky fa akaiky ny orsa mihodinkodina.
Miandry am-pahavitrihana isika hahita ireo biby mampinono marobe lehibe tonga ao anatin'ny faribohitr'izy ireo, ary ny faharetantsika dia nomena ho toy ny vongan-dranomamy mameno ny faritra. Hitanay ireo vatany marevaka, mihetsiketsika midina sy midina ao anaty rano, mipongatra ao amin'ny staccato mitambatra miaraka amin'ny ankehitriny. Tsy toy ny orcas resident, izay midadasika kokoa amin'ny ranom-boasarim-paty ity rano ity, mikarakara fandroana kely amin'ny sifotra kely sy ny tombo-kase, ka mahatonga azy ireo hatahotra ny ankamaroan'ny zavaboary miantso ity trano ity.
Alohan'ny handaozantsika ny toerana fisakafoanana atoandro, dia miakatra tohatra iray ho an'ny toerana avo indrindra amin'ny nosy aho. Ny dobo kely dia mamorona ny boribory boribory amin'ny vatan'ilay vatolampy, ny loko menamena, ny sasany ny lokon'ny karamel. Ny lozam-pifamoivoizana avy any an-dranomasina, ary ny zava-drehetra hitako dia zana-ketsa madinika ao anatin'io rano mangatsiaka io, satria ny hazo kesika sy hazo sedera dia manipy ny aloky ny ambany.
Nanaparitaka ny tanako aho ary namela ny rivotra nitsoka avy teo amin'ny tadin'ny rantsan-tanako. Mahatsiaro maimaimpoana aho Ny andro farany hitrandraka sy fanaovana kayak ny Inside Passage, ary tsy mieritreritra intsony aho fa ny voloko dia somary maivana kokoa noho ny mahazatra, fa ny akanjoko dia natsipy miaraka amin'ny sira, ary ny tongotro dia marefo ao anatin'ny kiriko. Ity fanandramana ity dia nanova tanteraka ny fiheveran-dison'ilay sambo na sambo na sambo. Mba hahafinaritra ireo fotoana ireo, dia tsy maintsy mihaona amin'ny natiora ianao. Tsy maintsy mandeha any amin'ny lalana rehetra ianao.
Sary toro-hevitra ho an'ny fanadihadiana ny lalan'i Indonezia any Columbia
Ny fanaovana kayak dia mitaky fahamatorana iray, ary mety hampidi-doza ny hampiato ilay sambo raha mbola ao anaty rano. Fa amin'ny torolalana avy amin'ny mpitari-dalana iray, dia ho hitanao haingana ny feonao. Na inona na inona, zava-dehibe ny manangona kitapo maina mba hitazonana ny fitaovanao ho an'ny ranomasina. Ny kakakaka tsirairay dia manana toerana fitahirizana eo anoloana, afovoany ary aoriana amin'ny sezanao, mba hahafahanao miditra haingana ny fakantsarinao mba haka sary orka, trozona trozona, ary fisidinana marika. Raha manana lopy lehibe zoom ianao dia ento. Na dia misy kayak iray akaiky indrindra aza dia afaka mankany amin'ny bibidia any British Columbia ianao, dia ho tianao ny hanana fahafahana hisambotra ireo zavaboary ireo amin'ny endriny feno.
Raha manana vatana fakan-tsary roa ianao, dia mety ho hevitra tsara ny hitondrana azy roa. Ampiasao ny volon'ny fakantsary ho an'ny fakantsarin'ny fakantsary iray - toy ny Canon Lens 100m - 400mm - ary manamboatra lantona mety kokoa amin'ny sary tsara tarehy horita - toy ny Canon Lens 24mm - 70mm. Ity dingana fanampiny ity dia mety hanampy amin'ny fanangonana sary avo lenta kokoa, satria mihetsika haingana ireo biby, ary mety tsy manam-potoana hanatsara ny fiovana an-tsokosoko ny vatanao raha tsy misy ny vatanao mihintsy amin'ny rano mipetaka miditra ao an-kakanao - eny fa na dia mena aza andro. Ny fananana an'io fahafaha-manao io dia ho azo ampiasaina rehefa misambotra ny bibidia any British Columbia .
Fotoam-pialantsasatry ny fianakaviana mahafinaritra avy any Vancouver, BC
Aiza no hijery ny fankalazana ny Fireworks Light ao Vancouver
Halloween any Vancouver
Vancouver tamin'ny volana desambra momba ny toetr'andro sy ny zava-nitranga
Review of Inn on Randolph, Napa, Californie
Coastal Sonoma Gay Guide - Bodega Bay Guide - Jenner Gay Guide
Dog Parks any Washington DC, Maryland ary Northern Virginia
Fetiben'ny Literatiora ao Berlin
Taona Niharan'izany? Manana fahafinaretana, North Jersey
Fantaro ny daty rehetra ho an'ny Fetin'ny vahoaka any Kanada amin'ny taona 2021
Zava-tsarobidy lehibe azonao tsidihina
Fividianana krismasy velona any Oklahoma City
Torolàlana iray hitsidihana an'i Playa Matalascañas, Closest Beach mankany Séville
Atsaharo ny fety any Kansas City miaraka amin'ny Krismasy ao amin'ny Park
Tanjona tsara indrindra any Meksika ho an'ny fianakaviana